Fisaraham-bahoaka amin’ny mpitondra izao… | NewsMada
Ahoana ihany ity fitsaram-bahoaka ity? Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Mandeha ny tombana etsy sy eroa, vinavina izay hitranga. Manana ny fijeriny ny raharaha sy ny mpitondra ny vahoaka, matoa mpitsara?
Tsy mihatra araka ny tokony ho izy ny lalàna. Tsy ambany lalàna avokoa ny olom-pirenena rehetra, fa misy ny tsimatimanota na fantatry ny ambanilanitra izao aza fa mandika lalàna? Mipoitra sy mirongatra ho azy ny fitsaram-bahoaka.
Tsy manaja lalàna ny mpitondra, ka tsy manana olon-kotahafina amin’izany ny vahoaka? Hany ka manao izay saim-pantany. Avy any ambony tsinona ny ohatra: toa mifampaka tahaka na mifaninana amin’ny ratsy sy fanararaotana, sanatria?
Samy mety ho tratran’izay ireo manampahefana any anivon’ny vahoaka rehetra any, isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Misy lehiben’ny faritra, na lehiben’ny distrika, mpitandro filaminana, na mpiasam-panjakana hafa … ?
Ahina hiafara amin’ny lonilony amin’ny mpitondra isan’ambaratonga no ho miakatra ny raharaha, raha tsy voafehy sy voalamina haingana. Tsy fandrebirebena vahoaka amina vahaolana famonoana afo, fa izay azo antoka haharitra.
Inona izay vahaolana izay? Raha fampanarahan-dalàna: mila atomboka amin’ny mpitondra aloha, raha tiana handaitra. Fifampitsinjovana? Mitsinjo vahoaka ve ny mpitondra momba ny ady tany, ohatra, ny delestazy, fidangan’ny vidim-piainana… ?
Vahaolana koa ny fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana? Ny fanjakana aza tsy matoky tena: ahina ho manakorontana sy manongam-panjakana avokoa izay mihetsika rehetra. Ampiriatina amin’ny herim-pamoretana, fampihorohoroana…
Eo koa ny hoe fikatsahana hatrany ny filaminana sy fitoniana. Mampilamina sy mampitony ve ny afitsoky ny mpitondra amin’ny fitrandrahana harem-pirenena tsy misy fampahafantarana, ohatra, ny famoriana hetra hihinana vahoaka…
Tsy manaiky ho diso sy tsy hihaino ny hafa ihany ny mpitondra? Nefa manome tsiny sy te hinoana sy henoin-teny… Efa mby amin’ny fisaraham-bahoaka amin’ny mpitondra tsy atokisany intsony izao ny raharaha. Inona no atao?